Semalt - Ahoana ny fomba hamantarana sy hiadiana amin'ny Spam Ghost amin'ny fampiasana Google
Ny spam dia mitranga rehefa mandray ny angon-drakitra tsy misy fangatahana. Ity karazana spam ity dia amin'ny sokajy roa. Mpitsoka spam sy Ghost spam. Ny fanesorana ny fifamoivoizana Ghost Spam dia mandresy lahatra, fa mila mamantatra hoe iza avy ny malware dia eo, aloha sy voalohany.
Mpitsikilo dia karazana spam izay mitsidika ny tranokalanao amin'ny alalan'ny fandefasana bots izay tsy miraharaha fitsipika toy ireo ao amin'ny robots.txt - شركة عزل حمامات ومطابخ فى السعودية. Rehefa miala amin'ny tranokalany izy ireo, dia misy ny tsipika momba ny fitsidihana ara-drariny amin'ny data Google Analytics, fa indrisy fa diso izany. Sarotra be ny mamantatra azy ireo satria miafina ao ambadik'ireo tranonkala marina sy miaraka amin'ny URL hafa.
Nanazava ny zava-niainany i Richard Abagnale, mpitantana ny Success Suisse amin'ny Semalt , momba ny fomba hiadiana amin'ny spam Ghost.
Ny Ghosts no spam iraisana indrindra. Tsy toy ny crawlers, tsy manana fifandraisana amin'ny tranonkalanao izy ireo, fa kosa izy ireo dia kendren'ny mpampiasa Google Analytics amin'ny alalan-drakitra goavana amin'ny alàlan'ny baiko fitadidiana Google Analytics. Mivezivezy amin'ny code ou izy ireo amin'ny fahazoana azy ireo avy amin'ny antoko fahatelo na fametrahana COD (UA-XXXXXX-Y). Satria tsy miditra amin'ny tranokalanao izy ireo dia mampiasa ny Protocol Measurement hanova ny data Google Analytics.
Ny ankamaroan'ny olona matetika dia manontany ny antony tokony handosiranao amin'ny spam ghost. Ny spam dia misy fiantraikany mahatsiravina amin'ny fanadihadiana ny tranok'ireo mpampiasa. Manimba ny hafaingan'ny Internet izy ireo amin'ny fampitomboana ny vesatry ny mpizara. Na dia tsy manelingelina loatra amin'ny Search Engine Optimization aza izy ireo, dia tsy mampiseho ny tena zava-misy ao amin'ny Internet. Amin'ny farany, ny soso-kevitry ny Search Engine dia hisy fiantraikany amin'ny fialan-tsasatry ny fikarohanao noho ny fanapahan-kevitra tsy ara-drariny sy ny fitsaratsarana tsy marina.
Na dia eo aza izany, dia manimba ny fomba fijery lehibe toy ny fifanolanana, fivoriana ary ny fihenanam-pandrefesana izay tsy voafehin'ny rindran-damina amin'ny endriny mifanohitra amin'izany, dia tsy hampahatezitra ny Search Engine Research Page (SERP). Tsotra, na dia sampam-panadihadiana malaza aza ny Google Analytics, fa tsy ny site rehetra no mampiasa Google Analytics. Izany dia manazava ny antony tsy hisy fiantraikany amin'ny antontan'isa avy amin'ny tranonkala Google ny angona avy amin'ny Google Analytics.
Misy fomba hiatrehana spam ghost amin'ny fampiasana Google Analytics. Ireo fomba ireo dia ahitana fepetra izay mampiasa sivana tokana amin'ny spam ghost..Tena ankasitrahana izany satria vao haingana ny mpampiasa no manavao ary manampy code vaovao manaraka. Raha tsy izany, tsy ilaina ny manohana ny mpampiasa. Farany, ny famantarana ny anaran'ny mpampiantrano mampiahiahy dia manampy amin'ny fitazonana spam fanta-daza amin'ny fidirana amin'ny data Google Analytics.
Ny dingana manaraka dia:
Voalohany , mandehana any amin'ny Google Analytics (izay toerana fijerinao tranokala ) ary fantaro ny tabilao fampahafantarana. Ao amin'ny tontonana havia, tadiavo ny 'Audience' ary tsindrio ity. Horonan-tsary avy eo amin'ny rindrin'ny havia ary hamantarana ny 'Technology' ary tsindrio eo. Apetaho amin'ny teknolojia ary mifidiana 'Network'. Hisy rakitra momba ny tambajotra miseho ary ambonin'izany, tsindrio ny 'Hostname'. Aorian'izany, hisy lisitry ny mpampiantrano miseho ho anisan'ireo izay ampiasaina amin'ny spam. Azonao atao ny mametraka ny anaran'ireo mpampiantrano valo. Ohatra, yourmaindomain.com na seosydney.com.
Faharoa , ampidiro ny anaran'ny mpampiantrano ary mamorona fomba fiteny tsy tapaka. Ohatra, seosydney \_ .com | yourmaindomain.com.
Fahatelo , mamorona sivana. Tsindrio eo amin'ny tabilao 'Admin' eo amin'ny tontonana havia havanana amin'ny farany ambany (miantoka ny fijerinao tsy misy filters). Tsindrio ny 'All Filters' ary tsindrio ny 'Add Add Filter' button. Soraty eo amin'ny 'Fitaovana fisie' ny 'Custom'. Izany dia mamorona sivana vaovao. Mamoroa anarana fisie. Misafidiana mba hampidirana ny 'Hostname' aorian'ny fijerena ny banga "Include". Alefaso ao amin'ny boaty 'ny solaitrabe' ny fiteninao matetika
Farany , mandehana manendry Filtres ary mifidiana 'Master' ary avy eo 'Add' amin'ny fomba fijery. Mifidiana 'Save' ary ampiharo ny valinyo.
Na izany aza, dia ekena fa isaky ny mampiditra fehezan-dàlana tracking amin'ny fanompoana ianao dia tsara kokoa raha ampiana ity code ity any amin'ny faran'ny sivana. Izany dia manampy amin'ny famoahana ny mety ho tohin'ny spam ghost.